Asongadin’ireo Hetsipanoherana Ny Mety Ho Herin’ny Lalànan’i Iràna Momba Ny Fahafahana Mahazo Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2018 15:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, فارسی, русский, Español, Français, عربي, English
Iranianina mpanao fihetsiketsehana mitondra takelaka milaza fandriampahalemana. Sary avy amin'ny Article 19, fampiasàna nahazoana alalana.
Nosoratan'i Afsaneh Rigot avy ao amin'ny ARTICLE 19 anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Tamin'ny 28 Desambra 2017, nipoaka nanerana an'i Iràna ny hetsipanoherana niely patrana tsy mbola nisy toa azy, izay lasa fampisehoana goavana indrindra ny tsy fitiavana ny governemanta hatramin'ny nisian'ireo hetsipanoherana taorinan'ny fifidianana tamin'ny 2009.
Namaly ny fihetsiketsehana tamin'ny herisetra ireo mpitandro filaminana ary nandritra ny tranga sasany aza dia tamin'ny hery mahafaty, niafara tamin'ny fisamborana miisa 3.700 sy fahafatesana miisa 21 nandritra ny fihetsiketsehana. Mpanao hetsipanoherana telo voasambotra nandritry ny hetsika no maty tany ampigadrana hatreto.
Nanaitra antso vaovao ho amin'ny fanoherana kolikoly sy hisian'ny mangarahara ireo hetsika tao Iràna ireo, manokatra ny mety ho fahafahana ho an'ny governemanta ny hampihatra tanteraka ny lalàna tokony hanohana ny fangaraharan'ny governemanta, tsy inona fa ny Lalàna momba ny Fahafahana Mahazo Vaovao ao Iràna.
Ahoana no mampifandray ny fihetsiketsahana tamin'ny 2017 amin'ny fangaraharana?
Hita fa noho ny kolikolin'ny governemanta sy ny fiakaran'ny vidimpiainana no nahatonga ny fihetsiketsehina tao Mahshad. Vetivety dia niparitaka tao Iràna izy ireny andro vitsy taorian'izay, miaraka amin'ny hafatra manomboka amin'ny teny faneva ara-toekarena “mofo, tany, fahafahana” ka hatramin'ny fanoherana ara-pôlitika ny Filoha Hassan Rouhani, Ayatollah Khamenei ary ny Repoblika Silamo amin'ny ankapobeny.
Miavaka amin'ireo hetsika tsy fitiavana governemanta tamin'ny 2009 ireo hetsika ireo, miaraka amin'ny fihitaran'ny fandraisana anjaran'ny sokajin'ny mpiasa mpamokatra, izay voadona mafy tokoa tamin'ny fiakaran'ny vidimpiainana sy ny fepetra fitsitsiana.
Ny tolokevitra vaovaon'i Rouhani tamin'ny Desambra 2017 mba hanampahana ny fanampian'ny fanjakana – vola nozaraina – ho an'ny olona miisa 30 tapitrisa ary nampiakatra ny vidin'ny solika sy atody hatramin'ny 50%. Izay vao mainka niharatsy niaraka tamin'ilay tolokevitra ny hampiakatra ny kitapombola omen'ny governemanta an'ireo fikambanana ara-pivavahana manjavozavo.
Navern'ireo hetsipanoherana ny antso hisian'ny mangarahara nataon'ireo tompon'andraikitra pôlitika sy ireo olompirenena ho an'ny asa ara-toekarenan'ny governemanta. I Rouhani mihitsy no niteny momba ny zo ho afaka mahazo vaovao sy ny filàna mangarahara tao anatin'ny kabariny 10 andro monja talohan'ireo fihetsiketsehina, izay niantsoany ho an'ny fangaraharana lehibe kokoa ho an'ny tetibola avy amin'ny Ministeran'ny Toekarena sy Fitantanambola.
Raha lazaina fohy, nahitana an'i Rouhani namoaka pitsopitson'ny tetibola vaovaon'ny fanjakana ny herinandro voalohan'ny Desambra. Nandeha toy ny hetsika an'ohatra ito fanapahankevitra mbola tsy nisy toa azy hankany amin'ny mangarahara ito, amin'ny famelàna ny mponina hahita ny fomba fandaniana ny volambahoaka.
Niteraka tsy fahafaliana niely patrana ilay tetibola, ary voajery ho tahaky ny nampipoaka ireo fihetsiketsehana, izay nandritra ireny fotoana ireny, nandehandeha tao amin'ireo fantsona telegrama malaza ny pikantsarin'ilay tetibola, nampiseho ny fanapahana ny fanampiana ary ny fiakaran'ny famantsiambola ho an'ireo fikambanana ara-pivavahana.
Mora tenenina fa tsy mora atao ny fahafahana mahazo vaovao
Ho fampiharana tanteraka ny Lalànany momba ny Famoahana sy Fidirana Malalaka hahazo Vaovao, nolaniana tamin'ny 2009 teo anivon'ireo tantara ratsy momba ny kolikoly fony fitondràn'ny Filoha teo aloha Mahmoud Ahmadinejad, afaka manoritra ny làlana ho an'ny Iràna ny kolikoly tsy mampahazo aina sy ny antso hisian'ny rafitra mangarahara. Na efa nanao dingana vitsivitsy aza ny governemanta mba handrisihana ny fampiasana azy amin'ny alàlan'ireo fiofanana ety anaty aterineto sy ireo fitaovana fanapariahana vaovao, mila miandry ny tena fampiharina tanteraka azy ilay lalàna.
Fitaovan'ny Governemanta momba ny zo hahazo vaovao. Avy amin'ny foia.iran.gov.ir
Afaka manampy ny mponina sy ny firenena ny fampiharana ilay lalàna mba hihazonana ny governemanta Iranianina ho tompon'andraikitra amin'ireo andraikiny manoloana ny vahoaka. Ankoatra ny fanaovana azy ho fitaovana hiadiana amin'ny kolikoly, omen'io ho an'ny mponina ihany koa ny zo hahazo vaovao momba ireo olana lehibe izay miantraika amin'ny fiainany, tahàka ny fiarovana ireo hôpitaly ao an-toerana na ny tetibola ho an'ny sekoly ao an-toerana. Omen'ilay lalàna ihany koa ny rafitra iray ho an'ny Iranianina mba hangatahana fidirana amin'ny taratasy manokan'ny tena avy amin'ireo rantsan'ny governemanta, ka isan'izany ny fiantohana ara-pahasalamana sy sosialy.
Tao amin'ny kabariny tamin'ny Desambra 2017 momba ny maha-zava-dehibe ny mangarahara eo amin'ny fitantanana, niteny ny filoha Rouhani:
Tsy manana fomba hafa afa-tsy ny mangarahara isika ho an'ny fanesoranan'ny kolikoly, tsy maintsy mandeha anaty efitra misy fitaratra daholo isika amin'izay afaka hitan'ny olona rehetra ny fepetra tsirairay raisintsika.
Ny fotoana no hiteny raha hitàna ny fampanantenany izy.
Hamantarana bebe kokoa: Namoaka fanadihadiana an'ilay Lalàn'i Iràna momba fahafahana mahazo vaovao ny ARTICLE 19, miaraka amin'ny torohevitra momba ny fomba fanaovana fangatahambaovao